यि हुन विश्वकै सबैभन्दा महंगा फल जसकाे मुल्य सुनेर तपाइ छक्क पर्नु हुनेछ - ज्ञानविज्ञान
तपाईले महंगा घर, मोबाइल फोन, कार देखि महंगा जनवारका बारेमा सुन्नुभएको होला । तर महंगा फलपुलका बारेमा कहिलै सुन्नुभएको छ ? संसारमा यस्ता ५ फल छन् जो महंगा छन । जसको मुल्य सुनेर पत्याउन मुस्किल पर्छ !
१. लास्ट गार्डन अफ हेलिगन पाइनएप्ल
यो प्रजातीको भूइँकटहर संसारमा पाइने सबैभन्दा महंगो फलको सूचीमा छ । यो भइँकटहरको मूल्य ९६ हजार पर्छ । यसको खेती इंग्ल्याण्डमा हुन्छ ।
२. रुबी रोमन अंगुर
यो प्रजातिको अंगुरको आकार निकै ठूलो हुन्छ । यो अंगुरका एक गुच्छाको २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पर्छ । यो अंगुर जापानमा पाइन्छ ।
एक पिसको ६० हजार रुपैंया पर्दछ । एक गुच्छामा २० दाना हुने र एक दान २० ग्रामको हुने बताइन्छ ।
३. स्कवायर तरबुजा
तपाईले अहिलेसम्म गोलो आकारको तरबुजा देख्नुभएको होला । तर चौकुना आरको तरबुजा देख्नुभएको छ । छैन होला ।
यस्तो खालको तरबुजा जापानमा पाइन्छ । एक तरबुजाको मूल्य ५३ हजार रुपैंया पर्दछ । यसको तौल पाँच किलो भन्दा माथि हुन्छ ।
४. युबरी खरबजुा
तपाईले गर्मीको समयमा खरबुजा खानुभएको होला । तर के एक खरबुजाको मूल्य १५ लाख भन्दा बढी तिर्नुभएको छ ।
सायदै छैन होला । जापानमा युबरी नामको खरबुजाको पाइन्छ । यो ज्यादै मिठो हुन्छ । यो प्रजातिको एक खरबुजाको मूल्य १५ लाख ३३ हजार भन्दा बढी पर्छ ।
५. ताइयो नो तामागो आँअप
भारतमा आँपका धेरै प्रजाति पाइन्छ । अल्पान्सो भारतको चर्चित आँप हो । भारतमा पाइने ताइयो नो तामागो प्रजातिको आँपलाई सूर्यको अण्डा भनिन्छ ।
यो प्रजातिको आँपको एक जोडीलाई २ लाख रुपैयाँ पर्दछ ।
सुन्दै अचम्म ! एक झुप्पो अंगुरको मूल्य ११ हजार डलर
संसार विचित्रकाे छ , प्रसस्तै धन भएपछि मूल्यकाे के कुरा ? अङ्गुरको मूल्य कति पर्छ हाेला ? सामान्यतया उत्तर अाउला कि पांच सय देखि हजार रूपैया किलाे । जापानमा भने मूल्य अलि फरक रहेछ ।
एक झुप्पो अंगुरको मूल्य १२ लाख रुपैयाँ पर्दछ भन्दा पत्याउन सकिएला ? नपत्याएर के गर्नु ? जापानमा मानिसहरुले ११ हजार डलरसम्म ( १२ लाख रुपैयाँ ) मूल्य तिरेर एउटा विशेष खाले अंगुरको सानो झुप्पा खरीद गर्दछन् ।
उक्त अंगुर रुबी रोमन जातको हो । त्यो अंगुरको गेडाको आकार ठूलो हुन्छ र एउटा गेडाको वजन करीब २० ग्राम हुन्छ । एउटा झुप्पोमा झण्डै २४ अंगुर हुन्छन् ।
रूवि राेमन मूल्य ११ हजार डलर
अर्को खास विशेषता त के भने यो अंगूर हरियो वा कालो होइन पूर्ण रुपमा रातो रङको हुन्छ । यो अङ्गुरको मूल्य यति चर्को हुनाले पनि त्यसलाई धनीको फल भनेर पनि चिनिन्छ ।
जापानको इशिकावा प्रान्तको सरकारी निकायले यो जातको अंगूरको विकास गरेको थियो । यो अंगुर खानमा निकै स्वादिलो छ ।
हालै उक्त अंगुरको एक झुप्पाको कनाजावा बजारमा लिलामी भयो । त्यसक्रममा एक होटल कम्पनीले एक झुप्पो अंगुर ११ हजार डलरमा खरीद
त्यस्तै यस फलकाे बारेमा पनि केही थप जानकारीः
केरा सेवनबाट तत्कालै उर्जा मिल्छ । त्यही भएर जोकोहीले पनि कमजोरी महशुस गर्ने वित्तिकै केरा खान सल्लाह दिन्छन् । खानासँगै वा खाजाको रुपमा केरा सेवन गर्न सकिन्छ ।
केरामा पोटासियमको मात्रा धेरै हुने हुँदा यसले रक्तचाप घटाउनका साथै शरीरमा तरल पदार्थको सन्तुलन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । केराले हड्डी बलियो मात्र बनाउँदैन डिप्रेसनबाट मुक्त गर्छ ।
Two‘bananas’aday keepadoctor away, हजुर, स्याउ मात्र हैन, दिनमा दुइ वटा केराले पनि तपाइँलाइ डक्टरहरूबाट टाढा राख्न सक्दछ । केरा खानाले हुने फाइदा बताउनु अघि एउटा कुरा थाहा पाउनुस कि केरा खानाले कुनैपनि व्यक्ति मोटो हुँदैन । केराले तपाइँलाइ तुरून्तै एनर्जी प्रदान गर्दछ । यसमा फाइबर र तीन प्रकारका शुगर हुन्छ – सुक्रोज, फ्रुक्टोज , ग्लूकोज।
एक रिसर्चका अनुसार डिप्रेशनका बिरामीले जब केरा खान्छन, उनीहरूलाइ आराम हुने गर्दछ । बास्तबमा केरामा एउटा यस्तो प्रोटीन हुन्छ, जसले तपाइँलाइ रिल्याक्स फिल गराउँदछ र तपाइँको मूड राम्रो बनाउँछ । केरामा भिटामिन पनि हुन्छ, जसले तपाइँको ब्लडमा ग्लूकोजको लेभल ठीक राख्दछ ।
केरामा भिटामिन B हुन्छ, जसले पताइँको नर्भस सिस्टमलाइ सहि राख्दछ । अस्ट्रेलियाको एक साइकोलोजी इन्स्टिट्यूटले रिसर्चमा के पाएका थिए भने कार्यस्थलमा भोक लाग्दा कामदारहरूले फास्ट फूड र स्न्याक्सले आफ्नो पेट भर्दछन ।
यसै कारणले टेन्शन र मोटोपन बढ्दछ । यसैले आवश्यक यो छ कि हरेक दुइ घण्टा पछि तपाइँ कार्बोहाइड्रेट भएको खाना खानुस, जस्तै केरा ।
Don't Miss it यस्ता लक्षण देखा परे हुनसक्छ क्यान्सर
Up Next यस्ता ६ फलफुलमा पाइन्छ अत्याधिक मात्रामा प्रोटिन, जान्नुहाेस्